अमेरिकी बिजेता ट्रम्पले सिंगापुरमा किमसँग हारे — OnlineDabali
अमेरिकी बिजेता ट्रम्पले सिंगापुरमा किमसँग हारे
Posted on June 14, 2018 by अनलाइन डबली
कुरा उट्पट्याङ्ग तालले शुरु गरौँ। शक्तिशाली मान्छेले मलमूत्र बिसर्जन गरेको पनि समाचार बन्दो रहेछ । उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता कीम जोङ उन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको ऐतिहासिक वार्तामा आफ्नो शौचालय समेत बोकेर पुगे । यो अविस्वासको पराकाष्ठा हो ।
कीमलाई चेतना थियो, सिंगापुरमा उनले ट्रम्पसँग खाना खाँदै गरेको वार्तामा खाएको कुरा पचाएपछि सीआईएले उनको बिश्टाको विश्लेषण गर्नेछ । त्यसबाट किमलाई लागेको सम्भावित ब्याधिको आधारमा अमेरिकाले उनको आयुको लेखाजोखा गर्नेछ । त्यतिमात्र होईन, रोगका आधारमा उनको कस्तो खान्कीमा कस्तो पदार्थ मिसाउँदा उनको मृत्युको दिन द्रुत गतिमा नजिक्याउन सकिन्छ, सीआईएले यसको पनि लेखाजोखा राख्नेछ ।
अमरिकी यो गुप्तचर संस्थाले क्युवाका फिडेल कास्त्रोलाई अट्ठाईस पटक मार्ने चेष्टा गरेको हो । त्यसैले सिंगापुर वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा निकालिएको गोलमटोल संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि किमले प्रयोग गर्ने कलमलाई उत्तर कोरियाली ‘फरेन्सिक’ विशेषज्ञहरुले सेतो पन्जा लगाएर ओल्टाईपल्टाई जाँचबुझ गरे । त्यसपछि उनीहरुले कुनै बिशेष रसायनमा भिजेको कपासको टुक्राले त्यो कलमलाई पुछपाछ पनि गरे । किमको हातमा पुग्दा त्यो कलम ‘स्यानिटाईज्ड’ भइसकेको थियो ।
ट्रम्प र कीमको वार्ताले विश्व शान्तिको प्रयासमा कति टेवा दियो, अथवा दिएन ? आगामी दिनमा राजनीतिक बिश्लेषकहरु अनि विदेश नीतिका पण्डितहरु भत्ता खाएर व्यस्त हुनेछन । टेलिभिजनहरुमा विश्लेषण जारी छ । बोल्ने र लेख्ने टाउकाहरुले बोले र लेखे बापत पैसा पाउँछन् । यो क्रम रोकिने छैन । तर मलाई बीबीसी टेलिभिजनले बनाएको एउटा कार्यक्रमले आकर्षित गर्यो ।
त्यो कार्यक्रममा कुनै राजनीतिक वा रणनीतिक विवेचना भएन । त्यहाँ भनियो, “ट्रम्प र कीमले तेह्र सेकेण्ड हात मिलाए । बीबीसीकी यी संचालिका भन्छिन, “ यसपटक ट्रम्पले क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टीन ट्रडो सेतो घरमा आउँदाको जस्तो हात तानातान गरेनन । ट्रम्प–कीमसँग सौम्य रुपमा प्रस्तुत भए । उनले कीमलाई धाप पनि मारे । कीमले आफू भन्दा दोब्बर उमेरका ट्रम्पलाई तलदेखि माथिसम्म हेरे । अनि उनले पनि ट्रम्पलाई अर्को धाप दिए । उनले दुई राष्ट्राध्यक्षका बीच बाञ्छित बराबरीको सम्बन्ध कायम गरि छोडे ।”
ट्रम्पले नेटो संगठनका सदस्य राष्ट्रका नेताहरुसँग भेट्दा उनको एक प्रकारको आक्रामक हात मिलाई हुने गर्थ्यो । किमलाई भेट्दा उनको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटीनलाई भेट्दाको जस्तै थियो । लाघुताभाषले ग्रस्त !
नयाँ ट्रम्प पार्टी
एक साता अघि अमेरिकी हाउस अफ कांग्रेसका रिपब्लिकन सभामुख जोन वेनरले कुनै एउटा अखबारमा अन्तर्वार्ता दिँदा भने, “अब यो मुलुकमा रिपब्लिकन पार्टीको अवशेष पनि बाँकी छैन । यो डोनाल्ड ट्रम्प पार्टीमा रुपान्तरित भइसक्यो । यो पार्टीमा अब तपाईंले अब्राहम लिंकनको पदचाप सुन्न पाउनुहुने छैन ।”जोन वेनर निराश छन् । आफ्नो अवकाशको समय उनी अमेरिकन स्पिरिट ब्रान्डको चुरोट तान्छन् । अलिअलि वाईन पिउँछन् । आफ्नो बराण्डामा बसेर अत्मप्रवन्चना गर्दै भन्छन, “हामीले चाहेको रिपब्लिकन पार्टीको मूल्य र मान्यता जोगाउन सकिएन ।”
जोन वेनर पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा सभामुख थिए । उनले ओबामालाई कहिल्यै सहयोग गरेनन् । “के आज ट्रम्पको जगजगी हुँदा सभामुखका हैसियतले उनलाई सहयोग गर्ने सम्भावना थियो त ?” यो प्रश्नको जवाफमा उनी भन्छन, “म चाँडै अवकाश लिन्थें होला ।”
डोनाल्ड ट्रम्पले अहिलेका सभामुखलाई पनि भीरको खोंचमा लगेर जाकिदिएका छन् । उनी रिपबलिकन पार्टीको परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्न असमर्थ सावित भए । डोनाल्ड ट्रम्पको उदय पछिको एक बर्ष नहुँदै उनले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरिसके ।
बरफको पर्खालमा बिष्फोट
अमेरिकी नेताहरुले शत्रुलाई मित्र तुल्याएको उदाहरण छ । अमेरिकाले कुनैबेला बेलायती उपनिवेश बिरुद्ध स्वाधीनता संग्राम लडेको हो । आज बेलायत अमेरिकाको सर्वाधिक विश्वसनीय सहयात्री हो । डोनाल्ड ट्रम्पका पुर्खाले आर्जेको जर्मनी बिरुद्ध अमेरिकाले युद्ध लडेकै हो ।
जापानमा हिरोसीमा र नागासाकीमा मानव ईतिहासको कलंकका रुपमा आणविक बम खसालेकै हो । भियतनाममा कहिल्यै जित्न नसकिने युद्ध लडेकै हो । आज यी सबै मुलुकहरु अमेरिकाको सामरिक पोल्टोमा अटाएका छन् । तर उत्तर कोरिया अमेरिकाको नितम्बमा घोच्ने एउटा यस्तो काँडा हो, जसको बिऊ तेत्तिसौं अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा ह्यारी ट्रुम्यानले सन् १९५३ मा रोपेका हुन् । उनीपछि अमेरिकामा एक दर्जन राष्ट्रपति फेरीए, तर उत्तर कोरियालाई सम्बोधन गर्ने साहस कसैले गरेन् । वास्तवमा यो साहस होईन, रणनीति थियो । अमेरिकाको उत्तर कोरियाली रणनीतिको केन्द्रमा यो एकलकाटे मुलुक होईन, चीन थियो ।
अहिले अचानक, डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरिया नामको बरफको पर्खाल भत्काउने चेष्टा गरेका छन् । उनले किमसँग बिदावारी भइसकेपछि एबीसी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यसो पनि भने, “उत्तर कोरियाली जनता कीमलाई माया गर्छन ।” तर उनकै अधिनस्थ संस्था सीआईए भन्छ, “त्यहाँका जनता उनीसँग त्रस्त छन् । चीनसँग बढी सामिप्य राखेको आरोपमा उनले आफ्नै काकालाई तोपले उडाए । आफ्नो सत्तामा व्यवधान हुने डरले आफना दाईलाई मलेशियामा नाटकीय ढंगले हत्या गरे । त्यहाँका जनता भोका छन् । तर, आफ्ना नेताको गुनगान गाउँन विवश छन् । नत्र, उनीहरु आफना परिवारलाई छोडेर निर्जन श्रम शिविरमा जान बाध्य हुनेछन ।”
डोनाल्ड ट्रम्पका लागि यस्ता कुराले खासै अर्थ राख्दैन । उनको ब्रह्माण्डको केन्द्रमा उनी स्वयं छन् । उनले बाराक ओबामाको पालाका सिआईए, एफबीआई र बाँकी अरु सत्र ओटा संस्थाका रिपोर्टलाई धोती लगाईसकेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्प सिंगापुरमा भएको कीमसँगको वार्तापछि कुनै न कुनै किसिमको एउटा ‘डील’ लिएर घर फर्किन चाहन्थे ।
दौत्य सम्बन्ध समेत नरहेको दुई मुलुकका बीचमा संसारलाई देखाउने गरि वार्ताको मन्चन भयो । ट्रम्पले आफ्नो मुलुकका लागि शुन्य हात पारे । किमले विश्वका सामु आफ्नो हैसियत स्थापित गरे । अलग थलग मुलुकको नाती पुस्ताले विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली बाजेपुस्तालाई कुटनीतिक रुपले परास्त गरिदियो ।
ट्रम्पले किमसँग हस्ताक्षर गरेको कागजमा सैद्दान्तिक बाहेक कुनै व्यवहारिक सहमति छैन । किमका बाजे कीम ईल सुंगले पनि अमेरिकासँग यस्तै केही चाहेका थिए । उनले सकेनन् । किमका बाबुकीम जोङ्ग ईलले पनि प्रयास नगरेका होईनन् । तर अमेरिकाका तत्कालीन कुनै पनि राष्ट्रपतिले उनलाई त्यो स्तरको पहिचान दिएनन । स्विट्जर्ल्यान्ड़मा पढेका अहिलेका नाती पुस्ते नेता अंग्रेजीमा प्रखर छन् । तर उनले ट्रम्पसँग आफ्नो भाषामा कुरा गरे । दौत्य सम्बन्ध समेत नरहेको दुई मुलुकका बीचमा संसारलाई देखाउने गरि वार्ताको मन्चन भयो । ट्रम्पले आफ्नो मुलुकका लागि शुन्य हात पारे ।
असफल प्रयासको पृष्ठभूमि
सन् २०१६को फेब्रुअरी, जर्मनीको बर्लीनामा चीसो थियो । अमेरिकी विदेश विभागका कर्मचारी, गुप्तचर संस्थाका सदस्यहरु र उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिहरुबीच एउटा बैठक भयो । त्यसको एक महिना पछी न्युजविक पत्रिकाका जोनाथन बोर्डरले यो कुरा प्रकाशित गरे ।
अमेरिका यो कुरा विश्वलाई थाहा नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । त्यो बैठकमा उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने आफ्नो आकांक्षा प्रस्तुत गरेको थियो । ओबामाको अडान थियो, पहिले उत्तर कोरियाले निशर्त रुपमा आफ्नो आणविक परिक्षण त्याग गर्नु जरुरी छ । ओबामाले सन् २००९ मा कार्यभार सम्भाल्नु अघिनै उत्तर कोरियाले पहिलो परिक्षण गरिसकेको थियो ।
त्यतिबेला तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले कुनै प्रतिक्रिया नै दिएनन । उनी आफ्नो दोश्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा थिए। त्यसभन्दा अघि बील क्लीण्टनले पनि उत्तर कोरिया संग वार्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर त्यो पनि विफल भएको ईतिहास थियो। ओबामाले यस पृष्ठभूमिमा आँट गरेनन। त्यसको केही दिनपछि उत्तर कोरियाले चौथो पटक ‘हाईड्रोजन बम’ को सफल परिक्षन गरेर ओबामालाई बिना बोलीको जवाफ दियो ।
ओबामाले धैर्य गरे । सन् २०१२ को उत्तर कोरीयाली भुखमरी पछि ओबामाले उत्तर कोरियालाई अर्को नयाँ प्रस्ताव पठाए । आणविक क्रियाकलाप बन्द गर्ने शर्तमा अमेरिका उत्तर कोरियालाई २ लाख ४० हजार टन खाद्यन्न पठाउन तयार भयो । यसको जवाफमा उत्तर कोरियाले तेश्रो आणविक परिक्षण गर्यो ।
सन् २०१५ मा ओबामाले ईरानसँग आणविक अप्रसार सन्धी गरेपछि अमरिकाले उत्तर कोरियासँग पनि त्यस्तै सन्धी गर्न सकिने अभिप्रायले नरम सन्देश पठायो । जवाफमा उत्तर कोरियाले चौथो आणविक परिक्षण गर्यो । ओबामाले उत्तर कोरियामाथि थप नाकाबन्दीको घोषणा गरे ।
चासो र चिन्ता
दक्षिण कोरिया र जापान उत्तर कोरियाको आक्रामक व्यवहारबाट त्रस्त छन् । यो दोश्रो विश्व युद्धपछि जापानको पराजय र कोरियाली युद्धपछि यो प्रायद्वीपमा कथित शान्ति स्थापना गर्ने नाममा यस भेगका जनतालाई पश्चिमाहरुले दिएको यो गजबको उपहार हो । कोरियाली प्रायद्वीप शीत युद्धको अहिलेसम्मको ताजा शिकार हो । तत्कालीन सोभियत संघले अगष्ट १९४५ मा कोरियालाई जापानको दासताबाट मुक्त गरेपछि पाँच बर्षको अन्तरालमा उत्तर कम्युनिष्ट भन्दै रसियाको भागमा पुग्यो । कोरियाको दक्षिण प्रजातान्त्रिक अमेरिकाको शरणमा पुग्यो । अमेरिकालाई यस भेगबाट आफ्नो सैन्य शक्तिको आधारमा रसिया र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सजिलो भयो ।
डोनाल्ड ट्रम्पले किमसँगको वार्ता पछि एबीसी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा आफ्ना सैन्य अधिकारीहरुसंग सल्लाह नै नगरि अब दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीच हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यास बन्द हुने संकेत दिए। यसले उनको आफनी रक्षा बिभाग ‘पेण्टागन’ मात्र होईन, दक्षिण कोरिया र जापानमा समेत नकारात्मक तरंग उत्पन्न गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाबाट प्रकाशित कोरिया हेराल्डले आफ्नो सम्पादकीयमा भनेको छ, ‘डोनाल्ड ट्रम्प धूर्त तर मूर्ख खेलाडी हुन् । उनी आफ्नो सुविधाका लागि लाखौँ मान्छेको जीवन संकटमा पार्न किञ्चित धक मान्दैनन ।”
डोनाल्ड ट्रम्पलाई भोट दिने उनका तथाकथित ‘भोट बेस’ डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा फरक छैन । यो एउटा यस्तो वर्ग हो, जो आप्रवासीलाई बिनाकारण घृणा गर्छ । कालाहरुलाई मान्छे गन्दैन । एउटा शिख सरदार र बीन लादेनको पगरीबीचको अन्तर बुझ्दैन । यो वर्ग दुई छाक म्याक्डोनाल्डको चीज बर्गर र कोक पाए सन्तुष्ट हुन्छ । ट्रम्पको प्रिय आहार पनि यही हो । ट्रम्प सिंगापुरमा हारे, तर अमेरिकामा उनी बिजेता हुन् ।
तिमीहरु युद्ध र क्रान्ति चाहन्छौं भने हामी पनि तयार छौंः विप्लव
२०७५/७६ को बजेटको गरे चिरफारः नेपालको अवस्था ग्रिसको भन्दा तल
Posted in विचार | Leaveareply
पहिला मनको गोठ भत्काऊ, त्यसपछि छाऊगोठ !
ओली-प्रचण्ड पेरिस कम्युनका हत्यारासँग मिलेका ‘मिलेराँ’जस्तै
अरुण-३ फर्काउन नसक्ने सांसद्, मन्त्री र नेताले नदीमा आत्मदाह गरे हुन्छ
मोदीको भ्रमण र ओली सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्र
भारत भ्रमण ओलीको जोखिम र अवसर